कुन जिल्लामा कति क्षेत्र घट्यो ? « Pahilo News
कुन जिल्लामा कति क्षेत्र घट्यो ?
प्रकाशित मिति : 31 August, 2017 9:45 am
१५ भदौ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा १ सय ६५ संघीय र ३ सय ३० प्रादेशिक क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।